WARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Laga Yaabo In Ay Kooxohooda Ka Tagaan Suuqa Xagaagan (Qaybta 2-aad) – Kooxda.com
HomeSuuqaWARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Laga Yaabo In Ay Kooxohooda Ka Tagaan Suuqa Xagaagan (Qaybta 2-aad)
WARBIXIN:10-ka Xiddig Ee Laga Yaabo In Ay Kooxohooda Ka Tagaan Suuqa Xagaagan (Qaybta 2-aad)
July 29, 2020 Abdiwali Adan Jamac Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Suuqa kala iibsiga ayaa si Rasmi ah u furmay kooxaha ayaana durba bilaabay dhaq-dhaqaaqa ay ku doonayaan in ay ku xoojiyaan kooxooda ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda.com waxa ay shalay idii soo gudbisay warbixin ku saabsan qaybta 1-aad ee 10-ka xiddig ee laga yaabo in ay kooxohooda isaga tagaan inta lagu jiro suuqa xagaagan.
Hadaba waxa aan maanta idiin soo bandhigi doonaa qaybta 2-aad ee xiddigaha laga yaabo in ay isaga tagaan kooxohooda waliba raadsadaan kooxo cusub xagaaga
Xiddiga daafaca Bidix ka ciyaara ee reer England ayaa doonaya in uu isaga tago kooxda Leicester City waxana uu haatanba kooxdiisa u sheegay in uu doonayo in uu isaga tago kooxda kuna biiro Chelsea.
Ben Chilwell ayaa wacdaro soo bandhigay xilli ciyaareedkan isaga oo laf dhabar u ahaa dadaalkii ay kooxda Leicester City ugu jirtay u soo bixista champions League markii dambena ugu soo baxday Europa League.
Paul pogba ayaa haystay wargaysyada kubada cagta wax ka qora bilihii ugu dambeeyay iyada oo si weyn loola xidhiidhinayay in uu isaga tago kooxda iyada oo ay doonayeen kooxaha Juventus iyo Real Madrid.
Inkasta oo uu haatan sheegay in uu doonayo in uu sii joogo kooxda Man United markii ay u soo baxday champions League hadana wax walba waa laga filan karaa suuqa kala iibsiga.
Waa xiddig ku fiican garabka weerarka waana xiddig leh awood kaas oo leh caawin iyo gool dhalin cajiib ah waxana uu qaab ciyaareed fiican ku soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn.
Kooxda Liverpool ayaa si weyn loola xidhiidhinayay saxiixiisa xilli ay kooxda Man City dhankeeda xiiso u qabto in ay ku xoojiso kaydkeeda.
Waa xiddig da’yar ah oo ku fiican daafaca dhexe waxana ay kooxdiisa Bourenmouth ka hadhay horyaalka premier League waxana uu ka mid yahay xiddigaha aadka loo qiimeeyo inkasta oo ay kooxdiisu dhibaatoonaysay.
Kooxaha Man United, Man City Iyo Chelsea ayaa dhamaantood doonaya xiddiga reer Holland iyaga oo u arka mid wax weyn ka caawin kara dhibaatada daafacana ka saari kara.
Xiddigan ayaa ka shalaynaya ka tagistii Liverpool waxana uu haatan ugu cad-cadyahay in uu ku soo laabto horyaalka premier League marka uu dhamaado xilli ciyaareedku.
Xiddiga Philippe Coutinho oo haatan Amaah ugu jooga kooxda Bayern Munich ayaa lala xidhiidhinayaa kooxaha Arsenal Iyo Tottenham kuwaas oo doonaya in ay ku soo celiyaan premier League.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Colombai ayaa wakhti lagu qiimayn jiray xiddigaha ugu fiican adduunka booskiisa waliba waxa uu wacdaro ka dhigay koobkii adduunka ee 2014.
Laakiin xiddiga ayaa ku dhibaatoonaya kooxda Real Madrid isaga oo aan kulamo badan u ciyaarin kooxda xilli ciyaareedkan Los Blancos ayaana doonaysa in ay iska iibiso iyaga oo waliba qiimo jaban ku iibinaya.
Daafaca Reer Senegal ayaa ah daafacyada ugu hadal haynta badan suuqa kala iibsiga iyada oo lala xidhiidhinayo kooxo badan oo waaweyn oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya adeegiisa.
Kooxaha Premier League ugu waaweyn iyo Waliba PSG ayaa doonaya adeegiisa kadib markii uu qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay Napoli iskuna muujiyay in uu yahay daafacyada ugu fiican addunka:
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Bayern Munich ayaa si Weyn loo hubaa in uu isaga tagi doono kooxda PSG iyada oo kooxda Liverpool haatan ugu cad-cadahay saxiixiisa.
Wax walba waxa ay tilmaamayaan in uu xiddiga reer Spain ku biiri doono kooxda Liverpool xilli uu heshiiska shaqsiga ah haatanba la gaadhay Reds kaliyana heshiiska ka dhimantahay in ay labada kooxood ka heshiiyaan.
Inkasta oo uu sanadkiisii ugu horeeyay ku qaatay Barcelona hadana waxa uu shaki weyn ku jiraa mustaqbalka Antoine Griezmann ee kooxda Barcelona iyada oo ay wararku sheegayaan in ay Barcelona haatanba suuqa dhigtay xiddiga si ay isaga iibiso xagaagan.
Antoine Griezmann ayaa noqday xiddiga ugu qaalisan Taariikhda Barcelona xagaagii hore laakiin waxa uu ku fashilmay in uu qaab ciyaareed fiican soo bandhigo xilli ciyaareedkan.
Waa xiddig kale oo reer France ah laakiin xiddigan waxa la hubaa in uu isaga tagi doono kooxda Barcelona inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Umtiti ayaa laf dhabar ka ahaa kooxda Barcelona laakiin wax walba waxa ay is badaleen markii uu dhaawacyo saaxiib la noqday taas oo keentay in uu ka boxo qorshaha tababarayaasha kooxda.
Jose Mourinho Oo Si Maldahan Ugu Digtay Bruno Fernandes.